Ntuchi LCZ696 nke Raw (936623-90-4) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / LCZ696 ntụ ntụ (936623-90-4)
SKU: 936623-90-4. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke LCZ696 ntụ ntụ (936623-90-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) bụ onye so n'òtù ọhụrụ nke ndị ọrụ a kpọrọ angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNI) nke jikọtara neprilysin inhibitor na angiotensin na-anabata ihe nchekwa (ARB). A na-egosi LCZ696 ntụ ntụ ugbu a maka ịgwọ ndị ọrịa nwere nkụda obi na ibelata mkpịsị ejection (HFrEF) n'ọnọdụ nke enzyme converting enzyme (ACE) ma ọ bụ ARB naanị. Aha ahia maka LCZ696 ntụ ntụ bụ Entresto.
LCZ696 ntụ ntụ video
LCZ696 ntụ ntụ isi agwa
aha: LCZ696 ntụ ntụ
Molekụla Formula: C24H29N5O3.C24H29NO5.5/2H2O.3Na
Ọbara arọ: 915.98
Nchekwa Nche: na -20 ° C 3 afọ Powder
LCZ696 ntụ ntụ na-ebelata ihe ize ndụ nke obi na obi obi
LCZ696 ntụ ntụ, sacubitril ntụ ntụ, valsartan, LCZ 696, LCZ-696
Raw LCZ696 ntụ ntụ Usage
LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) bụ onye so n'òtù ọhụrụ nke ndị ọrụ a na-akpọ angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNI) nke jikọtara neprilysin inhibitor na angiotensin receptor blocker (ARB). A na-egosi LCZ696 ntụ ntụ ugbu a maka ịgwọ ndị ọrịa nwere nkụda obi na ibelata mkpịsị ejection (HFrEF) n'ọnọdụ nke enzyme converting enzyme (ACE) ma ọ bụ ARB naanị. Akwukwo FDA na July 696 kwadoro ihe ize ndụ nke ọnwụ site na ọrịa obi na ọrịa ụlọ maka ọrịa obi na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala, NYHA klas II-IV, ma belata mkpịsị ejection. Nchikota neprilysin na mgbochi renin-angiotensin aldosterone (RAAS) egosiputa na o kariri nke onye na-emechi ACE. Aha ahia maka LCZ2015 ntụ ntụ bụ Entresto.
Ụdị nrịbama ịmalite bụ 49 / 51 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị.
Mbemiso mbụ nke LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ) 24 / 26 mg ugboro abụọ ka akwadoro maka ndị ọrịa ndị a:
• Onye na-anabata ACE ma ọ bụ onye ARB
• Onye na-emechi ọgwụ ACE ma ọ bụ ọgwụ ARB: obere ihe mmechi ACE na-arụ ọrụ: enalapril <= 10 mg kwa ụbọchị, obere dose ARB yiri: valsartan <= 160mg kwa ụbọchị
• Ọrụ siri ike (GFR <30ml / min / 1.73m 2)
• Ahụhụ na-adịghị mma nke ọrịa hepatic (nwa-Child-Pugh B)
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ọkụ LCZ696
A na-egosi LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) iji belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi na obi mgbawa ụlọ ọgwụ maka obi mgbawa na ndị nwere ọrịa HFrEF, NYHA klas II-IV. LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kwesịrị iji ya na GDMT ndị ọzọ n'ọnọdụ onye na-emechi ACE ma ọ bụ ARB.
• Mmetụta ihe ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ.
• Njikere nke njedebe ACE: LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) ekwesịghị ka a na-enye ya n'ime oge 36 maka ịnweta onye na-emechi ACE.
• Nabatara ndị na-arịa ọrịa shuga.
• Akụkọ banyere ọrịa angioedema metụtara ọgwụgwọ gara aga na onye na-emepụta ACE ma ọ bụ ọgwụ ARB.
Mmetụta ndị na-adịghị mma
(1) Ọrịa ụbụrụ Fetal: Ọgwụ niile na-arụ ọrụ na RAAS nwere ike imerụ nwa ebu n'afọ mgbe a na-enye ya n'oge ime ime. Ha nwere ike ibelata ọrụ ntinye nwa ebu n'afọ na nke atọ na nke atọ nke afọ ime ma mee ka nwa ebu n'afọ na ọrịa na-adịghị mma na ọnwụ. LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kwesịrị ịkwụsị ma ọ bụrụ na achọpụtara ime.
(2) Angioedema: E kwuru na Angioedema bụ 0.5% na LZC696 (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na 0.2% na enalapril n'oge oge ìsì abụọ na PARADIGM-HF. E nwekwara ọnụ ọgụgụ dị elu na Blacks vs. non Blacks na ndị nwere akụkọ ihe mere eme nke angioedema. Ọ bụrụ na angioedema emee, LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kwesịrị ịkwụsị ma kwesịghị ịghaghachi. LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) ekwesịghị iji ya mee ihe na ndị nwere akụkọ ihe gbasara ọrịa angioedema dịka onye na-emechi ACE ma ọ bụ ARB. Ọ bụrụ na ịgbanwere ma ọ bụ site na onye na-emechi ACE, a chọrọ oge 36 awa n'etiti ọgwụ ọjọọ.
(3) Hypotension: LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na-ebelata ọbara mgbali site na mgbochi nke RAAS ma nwee ike ịkpata hypotension symptomatic. N'ime oge abụọ nke PARADIGM-HF, 18% nke ndị ọrịa na LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kọrọ mmetụta ọjọọ nke hypotension vs. 12% na ndị ọrịa na enalapril. Ebe ọ bụ na e nwere ihe ize ndụ dị ukwuu na ndị ọrịa ahụ nwere RAAS arụ ọrụ, a na-atụ aro ka ị dozie nnu ma ọ bụ nwelite olu tupu ịmalite. Ọ bụrụ na nkwupụta ụda mgbaàmà na-eme, gbanwee diuretics na ọgwụ ndị ọzọ, ma na-emeso ihe ndị ọzọ kpatara hypovolemia na / ma ọ bụ belata dose nke LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ). Ọ bụrụ na hypotension symptomatic na-aga n'ihu n'agbanyeghị okelata na LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ), a pụrụ ịkwụsị ọgwụ ahụ.
(4) Akwụsịla ọrụ aka: LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) bụ onye na - egbochi RAAS; ya mere, a ga-atụ anya na mgbada n'usoro ọrụ akụrụngwa nwere ike ịdaba n'ihe ize ndụ ndị ọzọ tinyere ndị nwere nkwonkwo akwara. N'ime oge abụọ nke PARADIGM-HF, 5% nke ndị a na-emeso LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na enalapril kọrọ na ọ bụ ihe mmebi ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwekwuwanye na Scr> = 50% nọ na 16% nke ndị a na-ejikwa LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na enalapril. A ghaghị nyochaa ọrụ mmeghari anya na LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kwesịrị iji belata ma ọ bụ kwụsịrị maka nlezianya dị ịrịba ama na mgbada.
(5) Hyperkalemia: Site na mmetụta ya na mgbochi RAAS, LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) nwere ike ime hyperkalemia. N'ime oge abụọ nke ndị PARADIGM-HF, 12% nke ndị ọrịa na-emeso LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kọrọ otu mmetụta ọjọọ nke hyperkalemia. Ke adianade do, e kwuru ihe ndị dị na potassium> 5.5 mEq / L na 16% nke ndị a na-eji LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na enalapril. A na-agwa ndị ọrịa nwere nlezianya nlekota ihe ndị dị ize ndụ dị ka mmerụ ahụ dị ukwuu, ọrịa shuga, hypoaldosteronism, ma ọ bụ nri potassium dị elu. Mbelata ma ọ bụ ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịdị mkpa maka mmụba potassium.
Dabere na nhazi ikpe nke PARADIGM-HF bụ nke a chọrọ ka ndị ọrịa nwee ike ịnagide ma enalapril na LCZ696 raw ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) n'oge ndị isi na-agba ọsọ na-arụ ọrụ, ọ ga - abụ na a na - ma nwere ike ịdị elu karịa ịme ihe.
LCZ696 ntụ ntụ mere ka BP Mbelata karịa valsartan na SHR n'agbanyeghị ogo nke nnu, nke e jikọtara ya na mmụba dị ịrịba ama n'ime excretion sodium na mmechi ọmịiko ọrụ. Ọzọkwa, mmetọ BP na-agbakwụnye mmetụta nke LCZ696 raw ntụ ntụ na-eduga na nchedo obi oke na ọbara oke ọbara.
LCZ696 kacha ntụ
LCZ696 ntụ ntụ Marketing
Esi zụta LCZ696 ntụ ntụ si AASraw
LCZ696 Raw Powder Recipes
Guggulsterone ntụ ntụ